Iyo kernel 4.13 ichaburitswa munaGunyana 3 | Linux Vakapindwa muropa
Kernel 4.13 ichaburitswa munaGunyana 3
Nhasi, zvakaziviswa izvo Linus Torvalds inoda kusunungura iyo yekupedzisira vhezheni yeKernel 4.13 yeiyo inotevera Gunyana 3. Ichokwadi kuti iri zuva rekutanga iwe raunogona kuti riri padhuze nekona.
Izvi tinozviziva nekuti akazvizivisa iye pachake mushure mekuburitsa iyo RC 6 vhezheni yeKernel iyi. Nzira iyo yakaziviswa nayo yaive yakajairwa, ndiko kuti, kuburikidza neyeemail zvinyorwa zvinogara zvichibuda mushure meiyi vhezheni.
Mune zvinyorwa izvi, Linus aive netariro kwazvo.
Zvikanziwo izvozvo iyo RC 6 vhezheni yeKernel 4.13 iyo yakaburitswa mazuva mashoma apfuura Izvo hazviunze chero chakakosha, ndiko kuti, ndeye yekuvandudzwa iyo inosanganisira akajairwa RC zvigamba, senge kugadzirisa uye kururamisa kwe diki zvikanganiso.
Idzi inhau dzakanaka, se Shanduro dzeRC dzinoshanda kugadzirisa zvikanganiso zvakaonekwa uye "faira" chigadzirwa cheshoko rayo rekupedzisira. Kana mushanduro RC 6 pasina kana tsikidzi, zvingangoita kuti hapana matambudziko uye kernel yekupedzisira ichaburitswa pazuva rakaratidzwa.
Kernel 4.13 ichave yakakosha vhezheni, kunyanya nekuti mamwe masisitimu anoshanda senge Ubuntu 17.10 ivo vanounza iyi vhezheni yeKernel seyakagadzika vhezheni. Pasina kupokana, vateveri veLinux vari kutarisira kwairi, sekune mamwe mavhezheni makuru eKernel.
Panguva ino, isu tichafanirwa kugadzirisa kugadzirisa RC 6 vhezheni yeKernel 4.13, iyo yatinogona kudzika senguva dzose Kernel.org painoti "mainline". Ehe, yeuka kuti ichiri isina kugadzikana vhezheni uye kuti munzvimbo dzebasa, zvirinani kushandisa iyo "yakagadzika" vhezheni, iyo yava 4.12.8.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kernel » Kernel 4.13 ichaburitswa munaGunyana 3
Red Hat inowedzera .NET Core kune ayo gore mifananidzo uye OpenShift midziyo